Ny Kandidàn’i Etiopia Hitarika Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Misahana ny Fahasalamana Tratry ny Aretin’ny Tsy Fitandremana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2016 6:52 GMT
Tedros Adhanom. Sary Creative Commons avy amin'i Russel Watkins / Departemanta Anglisy ho an'ny Fampivoarana Iraisam-pirenena.
Nanafintohina olona maro i Tedros Adhanom, kandidan'i Etiopia ho Tale Jeneralin'ny Fikambanana Irasam-pirenena misahana ny Fahasalamana (OMS) rehefa nampiseho tsy fahampian'ny fahalalany ny paikady manerantany momba ny fahasalamana nandritra ny vovonana fanehoankevitr‘ireo kandida tamin'ny 2 Novambra 2016. Na dia niandraikitra ny raharahan'ny minisiteran'ny fahasalamana sy ny raharaham-bahiny tao amin'ny governemanta Etiopiana aza i Adhanon, tsy voavaliny ny fanontaniana tsotra mikasika ny anton'ny fanambarany hoe manao fanentanana izay izao amin’ny sehatra iray mampiroborobo ny filàna ara-pahasalamana amin'ny tany andalam-pandrosoana..
“Miala tsiny, tsy mazava ny fanontaniana, afaka hazavainao ve?” hoy ny navaliny, raha nagatahan'ny solontena iray avy any Brezila izy hanazava ny antony ihamboany hisolo tena ny tany andalam-pandrosoana, raha nifanindry tamin'ny fandaharam-potoanan'ny fahasalaman'ny tany mandroso ny fandaharanasa izay navoakany. Nanandrana niresaka tamin’ilay solontena Breziliana i Adhanon raha tokony hamaly fanontaniana, toa nanantena hahazo ny tian'ilay fanontaniana holazaina. Tamim-pitavozavozana, no niditra an-tsehatra ny mpandrindra, niezaka nanampy an'i Adhanom hahazo ny fanontaniana.
Kenda ihany koa i Adhanom namaly fanontaniana iray hafa tao amin'io vovonana fanehoankevitra io ihany, rehefa nanontaniana mikasika ny fiarahamiasa teknikan'ireo firenena mpikambana ao amin'ny OMS.:
The gentleman from Brazil might have ended candidacy to be the @WHO Director-General by asking a simple question. pic.twitter.com/mMXKhNaiix
Tokony ho afaka namarana ny filatsahan-kofidian'ny @DrTedros ho @Tale-Jeneralin'ny OMS tamin'ny fametrahana fanontaniana tsotra ilay rangahy avy any Brezila. #NoTedros
Mety hanimba ny fampielezankevitra politikan'i Adhanom ankehitreiny ho eo amin'ny toeran'ny filohan'ny sampana fahasalamana eran-tany io fisehoana nanahirana io. Vao haingana, nesorina tamin'ny andraikiny maha-minisitra azy tao amin'ny governemanta Etiopiana izy, taorian'ny fanamboarana governemanta. Nandritry ny fanambaràny tamin'ny herinandro lasa, nilaza i Adhanon fa nosoloin'ny governemanta Etiopiana taminà minisitra vahiny izy, amin'izay izy afaka mifantoka amin'ny fampielezankevitra.
Misaotra ny Governemantan'i Etiopia aho, tamin'ny namelany ahy hifantoka amin'ny filatsahako hofidiana ho Tale Jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny Fahasalamana.
Na dia tohanan‘ny Firaisambe Afrikana aza izy, tsy mitsahatra ny famelezana azy ataon'ireo mpikambana mahafatra-po amin'ny fiarahamonim-pirenena Etiopiana sy fikambanan'ny mpanohitra, izay manambara fa ny fifandraisana tendro amin'ny fitondrana Etiopiana dia tokony tsy hahalany azy hitondra ny OMS. Nanomboka nanangona sonia tamin'ny aterineto koa ireo fikambanana ireo.
Raha nanomboka ny fampielezankeviny i Adhanom tamin'ny Aprily 2016, rakotra hetsi-panoherana ny governemanta i Etiopia. Raha tanisaina ny herisetra natao tamin'ny mpanohitra, 20 ireo fikambanana politika sy sivily Etiopiana nanasonia taratasy manambara fa tsy manana fahaizana hitondra ny Fikambanana erantany misahana ny fahasalamana i Adhanom, amin'ny filazàna azy ho endriky ny fitondrana..
Mivaky toy izao ilay taratasy: “Atoa. Adhanom dia tsy nanome toky ho endriky ny fahasalamam-bahoaka fony izy minisitry ny fahasalamana teto Etiopia. […] Ny andraikiny amin’ny maha filohan’ny Minisitera Federalin’ny Fahasalamana azy dia rakotry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahaizana.
Manondro ny fitsirihana nataon'ny biraon'ny mpanaramaso ankapobeny, izay nitondra tatitra momba ny “tsy fahaiza-mitantana ny vola sy tsy fahaizana” ilay taratasy. Fikarohana mifandraika amin'izany, ary hita ao amin'ny aterineto, no manamafy fa ilay fitsirihana dia rakotra porofo antsipirihan'ny tsy fahaiza-mitantana ara-bola.”
Tao anatin'ny taratasy mitokana, mafana fo iray no nanipika ny antony tokony tsy hamelàna an'Atoa Adhanon hanakaiky ny OMS na aiza na aiza.
Ny takelaka “Al Mariam”, mpiaro ny zon'olombelona koa, dia manolotra fiampangana lehibe ny filrotsahan'i Adhanom: hofidiana:
Tsy mampino tsotra fotsiny izao ny tsy fahampian'ny fahalalinan-tsaina sy ny tsy fahampian'ny fahalalan'i Adhanom amin'ny resaka politika ivelany sy diplaomasia.
Tsy hoe fotsiny tsy ampy hevitra sy fitohizana ireo filazana am-pahibemaso ataony, fa tsy mitombina fotsiny izao. Tamin'ny volana Jolay 2015, nilaza i Adhanom fa demokrasia miaraka amin'ny iray isanjaton'ny vato i Etiopia! (Mazava ho azy, toy izany koa i Obama. Zavatra tsy misy dikany roa tsy manome zavatra misy dikany iray akory!)
Ireo fanambarana diplaomatika nataon'i Adhanom dia feno fahambaniana, zavatra tsy misy dikany, teny malaza sy haigaigena. Manana fironana miavaka amin'ny fandinihana ny olana sarotra amin'ny fomba fiteny efa lany andro nalaina avy tany amin'ny andro naha-mpianatra ho mpikatroka azy nampianarin'ilay mpampianatra azy hanao hosokoa, Meles Zenawi
Mampiseho fahalalana kely dia kely ny diplaomasia iraisam-pirenena i Adhanom ary mampiseho tsy fahampiana na dia fahazoana faran'izay bitika aza momba ny lalàna iraisam-pirenena, fifanarahana sy fifanekena.
Etsy andanin'izany, nezahan'i Adhanom napetraka ny hoe mety hitondra fijery vaovao amin'ny fitondrana ny OMS izy. Ankoatry ny Firaisambe Afrikana, misy amin'ireo fikambanana diaspora mpanohana ny fitondrana sy olo-malaza iraisampirenena koa nanohana ny filatsahany.
Niantehitra be tamin'ny haino aman-jery sosialy i Adhanom mba hanorina ny “marikany’ tao Etiopia — firenena izay voafetra be ny fahazoana miditra amin'ny haino aman-jery sosialy. Tsy tena voasakana manakory anefa ny fidirana, ka nahatonga ilay fahadisoana nataon'i Adhanom tamin'ny vovonana fanehankevitra tamin'ny 2 Novambra nitarika ho aminà fanesoana tamin'ny aterineto izay nifalian'ireo mpanakiana azy tamin'ny fananihaniana ny tsy fahaizany mahtalanjona
Ao amin'ny Twitter, ny tenifototra #NoTedros4WHO dia nahazo vahana, miaraka amin'ny mpampiasa maro milaza fa nanala ny tenany samy irery tsy hitazona toerana ao amin'ny OMS i Adhanom.
#OromoRevolution #AmharaResistance Tedy did you say English is my first language? Sustainable development goals on my mind 🙂 pic.twitter.com/ChsoXewz5s
#OromoRevolution #AmharaResistance Tedy niteny ve ianao fa ny Anglisy no teniko voalohany? Fampandrosoana maharitra no tanjona ao an'eritreritro